किन टिक्न सकेनन् चिनियाँ अटो ब्रान्ड नेपालमा ? कस्तो होला अबको बजार ? | Automotive News Nepal
किन टिक्न सकेनन् चिनियाँ अटो ब्रान्ड नेपालमा ? कस्तो होला अबको बजार ? ५ कार्तिक, २०७६
बिश्वमा सबैभन्दा बढी सवारीसाधन खपत हुने देश चीन बिश्वकै सबैभन्दा बढी सवारीसाधन उत्पादन गर्ने मुलुक समेत हो । हाल चीनमा संसरभर कहलिएका बहुराष्ट्रिय अटोमोबाइल ब्रान्डदेखि उसको आफ्नै स्थानीय ब्रान्डमा समेत सवारीसाधन उत्पादन भैरहेको छ ।
चीनमा निर्मित सवारीसाधनले विश्वबजारमा तहल्का पिटिरहेको पाइए पनि छिमेकी देश नेपालमा भने चिनियाँ ब्रान्ड सफल हुन सकेन । आजभन्दा १ दशक अघि झन्डैै एक दर्जन हाराहारीमा चिनियाँ ब्रान्डका चारपाङ्ग्रे सवारी साधन नेपाल भित्रिएका थिए । ती सवै अहिले इतिहास बनिसकेका छन् । भलै अहिले फेरि एकाध नयाँ ब्रान्ड भित्रिन थालेका छन् ।
एकदशक अघि नेपाली बजारमा ग्रेटवाल, चेरी, ज्योते, लिफान, गिली, लिङयोङ, बिएडव्लु लगायत अन्य थुप्रै ब्रान्डका चिनियाँ ब्रान्ड भित्रिएका थिए । शुरुवाती चरणमा ती ब्रान्डले राम्रै कारोबार गरेपनि पछि एकएक गरेर विलय हुन थाले ।
दीर्घकालीन सोचको अभाव
नेपालमा चिनियाँ ब्रान्ड आयात गर्ने कम्पनीहरुले क्षणिक फाइदा हेरेर मात्र कारोबार थालेको पाइन्छ । एकदुई लट गाडी ल्याएर कारोबार गर्ने र त्यसपछि देखाजाएगा भन्ने सोचाइबाट प्रेरित व्यवसायीका कारण चिनियाँ ब्रान्डको कारोबारमा दिर्घकालिन सोच बन्न सकेन । बिक्रीमा मात्र जोड दिइयो । स्पेयर पार्टस् र सर्भिस सेन्टर विस्तारमा कुनै पनि कम्पनीले खासै जोड दिन सकेनन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा जति व्यवसायीले चीनबाट सवारीसाधन आयात गरे ती प्रायः सबै अटोमोबाइल व्यवसायमा अनुभवहीन थिए । त्यसैले पनि नेपालमा चिनियाँ ब्रान्डका सवारीसाधनको कारोबार दिगो हुन नसकेको हो ।
मूल्य कम गर्न गुणस्तरमा सम्झौता
हामी नेपालीहरुको सोचाइमा अहिले पनि चिनियाँ ब्रान्ड भन्ने वित्तिकै सस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । गुणस्तर जे सुकै होस् सस्तो भने अवश्य हुनुपर्छ भन्ने बुझाइका कारण कतिपय कम्पनीहरुले सवारीसाधनको गुणस्तरमा सम्झौता गरी कम गुणस्तरका सवारीसाधन भित्र्याए । यद्यपि बिक्री गर्दा भने गुणस्तर र पर्फमेन्सका बारेमा बढाइचढाई गरेरै कारोबार सल्टाए । जव ग्राहकले भने अनुसारको पर्फमेन्स पाएनन् त्यसपछि यस्ता ब्रान्डका सवारीसाधनमा रुचि घट्दै जान थाल्यो । विस्तारै बजारमा चिनियाँ ब्रान्ड गुणस्तरिय छैनन् भन्ने हल्ला फैलिन थाल्यो र यसको प्रत्यक्ष असर केही राम्रा भनिएका ब्रान्डको विक्रीमा समेत देखिन पुग्यो । हैन भने तत्कालिन समयमा राम्रो संख्यामा कारोबार भएका चेरी, ग्रेटवाल, ज्योते र गिली जस्ता ब्रान्ड कारोबार थालेको छोटो समयमै इतिहास बन्नु पर्ने थिएन ।
के होला भबिष्य ?
एकपटक बद्नाम भैसकेको ब्रान्ड पुन बजारमा बिक्री बितरण थालिनु व्यावसायिक हिसावले निकै चुनौतीपूर्ण हुने हुँदा सम्भवतः नेपालका व्यवसायीहरुले पुरानै ब्रान्डका सवारीसाधन आयात नगर्लान् । यसो भन्दैमा नेपालमा चिनियाँ ब्रान्डको भविष्य समाप्तै भयो भनेर भनिहाल्नु पनि उपयुक्त हुँदैन । पछिल्लो समय केही नयाँ कम्पनीहरुले पुनः चिनियाँ ब्रान्डका सवारीसाधन आयात थालिसकेका छन् । हाल एमएडव्लु ग्रुप अन्तर्गतको एमएडब्लु वृद्धि कमर्सियल भेइकलले फोटोन ब्रान्ड र कोजु नेपालले डिएफएसके ब्रान्डका सवारीसाधन आयात गरी कारोबार थालेका छन् । विस्तारै अन्य कम्पनीहरुले समेत नयाँ नयाँ ब्रान्ड भित्र्याउने योजना बनाइरहेका हुनसक्छन् । इलेक्ट्रिक भेइकल अन्तर्गत बीवाईडी, दाहे र अन्य केही कारलगायत दर्जनौ ब्रान्डका स्कुटर आयात भैरहेका छन् । जुलुन ब्रान्डका विद्युतीय बाइक, स्कुटर र रिक्सा एसेम्बल गर्नका लागि परवानीपुरमा एसेम्बल प्लान्ट नै प्रारम्भ भएको छ ।
त्यसैले भोलिका दिनमा चिनियाँ ब्रान्डले आफ्नो साख बढाउँदै जान सक्ने उच्च सम्भावना कायमै छ । जसका लागि आयातकर्ता कम्पनीहरुले दीर्घकालीन सोचाइका साथ कारोबार थाल्नु भने अपरिहार्य छ ।
बिलिङ मिटर जडानमा ट्याक्सी मालिकको दादागिरी
काठमाडौं - सरकारले लागू गरेको ट्याक्सी बिलिङ मिटर जडानमा ट्याक्सी मालिकले दादागि...
त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म चार लेनको फ्लाई ओभर
काठमाडौं - राजधानीको त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघर मण्डलासम्म निर्माण हुने चार लेनको...